चुनावको अर्थतन्त्र बडो अजीवको हुन्छ - Karobar National Economic Daily
चुनावको अर्थतन्त्र बडो अजीवको हुन्छ
query_builderMay 14, 2017 12:02 PM supervisor_account visibility3607
गोपीनाथ मैनाली, सचिव निर्वाचन आयोग
गोपीनाथ मैनाली विकास र योजनाका लागि नौलो नाम होइन । कर्मचारीतन्त्रभित्र एउटा सफल व्यक्तिका रूपमा चिनिएका मैनाली अहिले फरक भूमिकामा छन् । निर्वाचन आयोगको सचिवका रूपमा आइतबार हुन गइरहेको ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहको चुनाव व्यवस्थापनका खटिँदा उनलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सह–सचिवका रूपमा काम गरेका मैनालीसँग आइतबार हुन लागेको चुनाव, यसको तयारी, चुनावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, स्थानीय निकायमा योजना बाँडफाँडलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी भीम गौतम र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी:
निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहँदा पनि निर्वाचन नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो अन्योल थियो । यसलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनाव हुँदैन कि भन्ने मनस्थितिमा थिए । म कुनै टेलिभिजन च्यानलमार्फत आह्वान गरिरहेको थिएँ कि चुनावमा हुन्छ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर ।
त्यतिबेला पनि उहाँहरूले सम्पर्क गरेर आशंका प्रकट गरिरहनुभएको थियो । यस्तो स्थिति थियो । साह्रै अन्योलको अवस्थामै निर्वाचन हुन लागेको छ । हुन त मलाई चुनाव व्यवस्थापनमा त्यस्तो अनुभव छैन । तर, मिति बारम्बार परिवर्तन हुन्छ । संविधान बन्ने बेलामा जस्तो उकुसमुकस भएको थियो त्यस्तै गरी निर्वाचनको मिति पनि बिस्तारै सर्दै–सर्दै जान्छ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् भन्ने थियो । राजनीतिक दलहरू आशंकामा थिए । त्यो बेलामा आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिसकेको थियो । अहिले त सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसक्यो ।
सुरक्षा व्यवस्थापन भइसक्यो । यी सबै तयारी भइसकेपछि मतदातालाई आह्वान गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरियो । आमसञ्चारमाध्यमले पनि निर्वाचनको पक्षमा माहोल बनाउन ठूलो सहयोग गरेका छन् । निर्वाचनको माहोल बनाउन आमसञ्चारका माध्यमसँगै युवा नेता तथा मतदाताको ठूलो सहयोग छ । पार्टीका युवा नेता, महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक र आमसञ्चार माध्यमले निरन्तर सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत निर्वाचनको व्यवस्थापनमा संलग्न सबैलाई दिएको निरन्तर दबाबका कारण निर्वाचन सम्भव भएको हो ।
मतगणना स्थानीय तहमै गणना हुन्छ कि जिल्ला सदरमुकाममा गणना गरिन्छ ?
मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा ल्याएर गणना हुँदैन । स्थानीय तहमै गणना हुन्छ । किनभने यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । २ सय ८३ स्थानीय तहमा मतगणना हुन्छ । स्थानीय तहको जहाँ–जहाँ केन्द्र हो, त्यहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुन्छ । त्यही निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै मतगणना हुन्छ ।
करिब दुई दशकपछि स्थानीय चुनाव हुँदै छ । अघिल्लो चुनाव र यो चुनावमा के फरक छ ?
१९ वर्षअघि भएको स्थानीय चुनाव र यो चुनाव मौलिक रूपमै फरक छ । १९ वर्षअघिको चुनाव सेवा प्रवाह गर्ने चुनाव हो । सरकारको निक्षेपित र केही विकेन्द्रित अधिकार प्रवाह गर्ने चुनाव थियो त्यो ।
अहिले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने, स्थानीय शक्ति स्रोत, नीति निर्माण सबै गर्ने चुनाव हो । राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहमा सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने चुनाव हो । त्यहाँ न्यायिक संयन्त्र छ । त्यहाँ विधायिकी संयन्त्र छ । त्यहाँ कार्यपालिकाको संयन्त्र छ । त्यहाँ अनुगमन संयन्त्र पनि छ । पहिला स्थानीय स्वायत्त शासनले केही अटोनोमी दिएको थियो । तर, त्यो पूर्ण थिएन ।
अहिले चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासनभन्दा पनि स्थानीय सरकारको चुनाव हो यो । त्यसकारणले यो चुनाव नितान्त भिन्न छ । अब स्थानीय मुद्दामा स्थानीय निर्णय निर्माण गर्ने, स्थानीय न्यायिक निरूपण गर्ने, स्थानीय रणनीति निर्माण गर्ने, स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने सबै थोकको अधिकार संविधानले दिएको छ । यो अब नेपालको सरकारको आंगिक संरचना भन्दा पनि यो स्थानीय सरकारको चुनाव हो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत खस्ने अनुमान छ ?
हाम्रो अपेक्षा सतप्रतिशत मत खसोस् भन्ने हो । सतप्रतिशत बदर पनि नहोस् भन्ने हो । तर, संविधान जारी भएपछिको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली केही जटिल पनि छ । प्रक्रियाले केही जटिल बनाएको छ ।
यस अर्थमा एकैपटक व्यक्तिहरूले सातवटा पदलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा हामीले सोचेजस्तो नतिजा त नआउन सक्छ । एक मिनेटभन्दा बढी नै मत दिन समय लाग्छ । तर, निर्वाचन आयोगको अपेक्षा शतप्रतिशत मत खसोस् र बदर पनि नहोस् भन्ने हो । यसका लागि हामीले निर्वाचन शिक्षा, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक संयन्त्रहरूको परिचालन, आमसञ्चार माध्यमहरूको परिचालन गरिरहेका छौं ।
खसेको मतको बदर हुने संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा घटोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यही अनुसारका कामहरू पनि गरिरहेका छौं ।
विगतमा धेरै मत बदर भएको तीतो अनुभव छ । अहिले मत बदर नहोस् भन्नका लागि मतदाता शिक्षालाई यहाँहरूले कत्तिको प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुभयो ?
मतदाता शिक्षा जति दिए पनि पर्याप्त हुँदो रहनेछ । हामीले आवश्यक मात्रामा मतदाता शिक्षा दिने भनेर लागि प¥यौं । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा पहिले पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट शिक्षा दिइरहेका थियौं ।
जब मिति घोषणा भइसकेपछि हामीले नमुना मदतान कार्यक्रम, स्वंसेवक निर्वाचन, मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालनलगायत विभिन्न वर्ग तप्कालाई परिचालन गरेका छौं । हामीले एउटा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले एक दिनमा २२ जनालाई प्रशिक्षण दिने गरी ७ प्रकारका सामग्री दिएर, नमुना मतदान गर्न लगाएका छौ ।
२१ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरेका छौं । एनिमेसन रडियो, टिभीबाट गरेका छौं । माइकिङ गरेका छांै । जब हामीले मतदाता परिचयपत्र वितरण ग¥यौं, २७, २८, २९ र ३० गते पनि दुई जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्तामार्फत नमुना मतपत्र राखेर सिकाएका छौं ।
यस अर्थमा मतदाता शिक्षा पर्याप्त छ भन्ने लाग्छ । तर, कति भए पर्याप्त हुने भन्ने यसको सीमा हुँदैन, किनकि मुख्य त सचेत मतदाता विकास गर्नुपर्छ । यसले कुनै प्रभाव दबाब वहकावमा नलागेर, आफ्नो स्वविवेकले मतदान गर्नुपर्छ । हामीले अपेक्षा गरेजस्तै मतदाता शिक्षा दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचरसंहिताको पूर्ण पालना नभएको देखियो नि ?
विगतको तुलनामा आचारसंहिताको बढीभन्दा बढी पालना भएको छ । मतदाता सचेत भएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि सचेत भएका छन् । यसरी हेर्दा आचारसंहिताको पूर्ण पालना भएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन होला कि भनेर हामीले सूक्ष्म अनुगमनकर्तालगायतका व्यक्तिहरूलाई गाउँगाउँमा परिचालन गरिरहेका छौं ।
योबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्वाचन अधिकृतमार्फत अनुगमन भएको छ । साथमा मिडिया पनि छ । तर, केही उजुरी आएका छन् । यी उजुरीमध्ये कतिपय उजुरी ठूला ब्यानरको प्रयोग, भोज भतेर, जिन्सी कुरा बाँडियो, मोटरसाइकल बाँडेको र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारी सरुवा गरेको, नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याएको भन्ने जस्ता छन् ।
यस सन्दर्भमा हामीले सम्बद्ध राजनीतिक दल, नेपाल सरकार विभिन्न निकाय, जस्तै: अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका छौं ।
कतिपय अवस्थामा हामीले सचेत गराएर चेतावनीसमेत दिएका छौं । अहिलेसम्म ठूलो कारबाही भएको छैन र गर्नु पनि नपरोस् । किनभने दलहरूलाई असल राजनीतिक संस्कारमा लिएर आउने कुरा पनि हो । आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउने काम निकै जटिल छ । नैतिक बन्धन पनि हो ।
जेठ ३१ मा हुने भनिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनका बारेमा धेरैको आशंका छ । आयोगको धारणा के हो ?
जसरी पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म सबै राजनीतिक दलहरू, केही आमसञ्चारमाध्यमहरू र सर्वसाधारणले आशंका गरिरहनुभएको थियो ।
यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने कुरामा आशंका राख्दाराख्दै पनि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । साथै, पहिलो चरणको चुनाव भइसकेपछि दोस्रो चरणको चुनाव गर्न झन् यसले दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन केही अगाडि सार्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
निर्वाचन आयोगलाई यो विषयमा थाहा छैन । हामी जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्छौं । मलाई लाग्छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले सल्लाह गरेर निर्धारण गरेको मिति जुन छ । त्यही मितिमा निर्वाचन हुन्छ । यसमा आशंका राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दोस्रो चरणको चुनाव अघि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आयोगले पनि सरकारले बजेट ल्याउन पाउँछ भनेको छ । चुनावको मुखैमा बजेट ल्याउँदा मतदाताको मानसिकतामा असर पर्दैन ?
पहिलो कुरा हामीले दुईवटा संवैधानिक व्यवस्थालाई तुलना गर्नुपर्छ । संविधानतः निर्वाचन गर्ने, त्यसको रेखदेख, नियमन, नियन्त्रण गर्ने अभिभारा निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ । यसलाई हामी संवैधानिक रूपमा दायित्व निर्वाह गर्न लागिपरेका छौं ।
अर्को संवैधानिक व्यवस्था जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्नेछ । यी दुवै व्यवस्थाको बीचमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चुनावको बीचमा नयाँ नीति, बजेट कार्यक्रम लिएर आउँदा आचारसंहिता अनुकूल देखिँदैन भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले पहिलो चरणको चुनावको मतगणना मतदानलगत्तै गर्ने भनेको छ । यसले पनि मतदातको मानसकितामा प्रभाव पार्छ, त्यसले दुवै चरणको निर्वाचनपछि मात्रै मतगणना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?
यो राष्ट्रिय चुनाव होइन । यो स्थानीय तहको चुनाव हो । यसमा स्थानीय तहका मुद्दा उठ्छन् । त्यसकारणले एक ठाउँको मुद्दा र अर्को ठाउँको मुद्दा विशेष रूपमै फरक हुन्छ । काभ्रेको मुद्दा र मकवानपुरको मुद्दा नितान्त फरक हुन्छ । काठमाडौंको मुद्दा र चितवनको मुद्दा फरक हुन्छ । यसकारणले गर्दा प्रभाव पार्दैन भन्ने लाग्छ । दोस्रो कुरा, नेपाली मतदाता सचेत छन् ।
विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि उहाँहरूको आफ्नो स्वविवेकले मत अभिमत व्यक्त गर्ने कुराहरू विकास भइसकेको छ । कानुन, सिद्धान्त र अभ्यास पनि के हो भने निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतपरिणाम तत्कालै घोषणा गर्नुपर्छ । मत राख्नका लागि होइन ।
तत्काल जनताले दिएको मत परिणाम सार्वजनिक गर्नु हो । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो यो । निर्वाचन आयोग प्रस्ट छ । मतदान भइसकेपछि मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा जब संकलन गर्छौं, मतगणना सुरु हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि कति खर्च हुँदै छ, आयोगले तोकेको सीमाअनुसार नै उम्मेदवारहरूले खर्च गरिहेका होलान् भन्न सकिने अवस्था छ ?
चुनावको अर्थतन्त्र बडो अजीवको हुन्छ । किनभने, यो महाअभियान हो । मुलुकका सबै व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुन्छन् । त्यसैले चुनावको अर्थतन्त्र ठूलो र छुट्टै हुन्छ । यो चुनावको अर्थतन्त्रमा सरकारको पाटो कति होला भन्दा २५ देखि ३० अर्बजति लाग्छ । सुरक्षा परिचालनको बजेट यसमा संलग्न छैन । योबाहेक राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च पनि छ ।
हामीले उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म वडादेखि महानगरको मेयरसम्मलाई सीमा तोकेका छौं । पहिलो चरणमा झन्डै ५० हजार उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले केही खर्च त गर्नुहुन्छ । यसले चुनावको खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ । यसले सर्वसाधरणको हातमा क्रयशक्ति बढाउँछ ।
यसले सकारात्मक परिवर्तन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ठूलो हिस्सा कभर गर्छ भन्ने लाग्छ । मेरो विचारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा सरकारले गर्ने खर्च लगभग १ खर्बजति हुन्छ ।
योजना आयोगमा काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा योजनाको हिसाबले अब स्थानीय तह कसरी अघि बढ्छन् ?
म लामो समय योजना र विकासको अनुशासनमा काम गर्दै आएको मानिस हो । अहिले म विकास व्यवस्थापनबाट निर्वाचन व्यवस्थापनमा संलग्न छु । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अबको योजना प्रणालीमा मौलिक रूपमै भिन्नता हुन्छ ।
हिजो सबै काम केन्द्रले खटाएको स्रोत, साधन, अधिकार प्राथमिकताको आधारमा काम हुन्थ्यो भने अब प्राथमिकता निरूपण पनि स्थानीय तहमा हुन्छ । स्रोत परिचालन पनि त्यहाँ हुन्छ । केही ठूला अधिकार, ठूला काम बहुप्रदेशमा संलग्न हुने कामहरू, ठूला जोखिम लिनुपर्ने कामहरू (प्राविधिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय र भौगर्भिक) यी पाँच प्रकारका ठूला जोखिम हुने कुरामा केन्द्र सरकारको बढी डोमिनेसन हुन्छ ।
अरूमा स्थानीय तह नै यो काम गर्न स्वायत्त छन् । संविधानका अनुसूचीहरूले उसलाई त्यो अधिकार दिएको छ । अब हामीले कल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली भनेको पूर्ण, स्वायत्त, स्थानीय सरकारको प्रणाली पनि होइन । जस्तो, अमेरिकामा देख्नुहुन्छ । त्यस्तो पनि होइन । मलेसियामा देखिएको जस्तो केन्द्र हाबी हुने प्रणाली पनि होइन ।
भारतमा देखिएको जस्तो केन्द्र हाबी हुने निक्षेपित अधिकार राज्यले प्रयोग गर्ने पनि होइन । स्विट्रल्यान्डको जस्तो केन्द्रभन्दा स्थानीय तह शक्तिशाली हुुने पनि होइन । त्यस्तो योजना प्रणाली अब हामी अवलम्बन गर्दैनौं । हामीले जर्मनीको जस्तो सहकारितामूलक विकास व्यवस्थापन, सहकारितामूलक शासन प्रणाली व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौं ।
कतिपय काम, योजना ठूला उत्खनन, ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भएर त्यसका आधारशिला स्थापना गर्ने कुरामा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचमा साझेदारी पनि हुन सक्छ । कतिपयमा यी दुवै निकाय स्वायत्त रूपमा पनि छन् । कतिपय कुरामा स्थानीय सरकारको क्षमता विकास नभइन्जेल केन्द्रले क्षमता विकासमा खेल्ने भूमिका पनि अबको योजना प्रणालीमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानले त्यो कुराको संकेत पनि गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन अथवा स्थानीय सरकार भन्ने कुरा कस्तो हो भने अभ्यास गर्दै परिष्कृत हुँदै नयाँ–नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दै जाने प्रणाली भएकाले आउँदा दिनमा अहिलेको योजना प्रणाली मौलिक रूपमा भिन्न हुन्छ ।
कार्यक्षेत्र मौलिक रूपमा विभाजन गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विशेष जोखिम क्षेत्रमा, विशेष कार्यक्षेत्रमा केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचमा सहकार्य हुने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको जस्तो योजना आयोग, योजना प्रणाली, अहिलेको जस्तो बजेट प्रणाली हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौं । अहिलेको वर्षको बजेटदेखि नै यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
नेपालको कुल आम्दानी र खर्चबीचमा धेरै ठूलो खाडल छ । अब स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं । स्थानीय तहमा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हाम्रो आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कसरी मिल्छ ?
अब हामीले जिम्मेवारी, स्रोत र अधिकार नै बाँडफाँड गरिसकेपछि छुट्टाछुट्टै ठाउँबाट खर्च हुन्छ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने शक्ति पनि स्थानीय सरकारमै हुन्छ ।
त्यसैले यो धेरै खर्चिलोभन्दा पनि व्यवस्थित गरेर थप स्रोत परिचालन गर्ने हो, जसका कारण सेवा र विकासको लागत घट्छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीचमा स्वचालित संयन्त्रहरू पनि परिचालित हुन्छन् ।
अहिलेको स्थानीय संरचनाले आर्थिक भार थेग्न सक्दैन भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् नि ?
यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ । सुरु–सुरुका दिनमा केही प्रशासनिक खर्च बढ्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ । तर, आउँदा दिनमा यसले राम्रा सफल अभ्यास गर्दै जाँदा नयाँ–नयाँ स्रोत परिचालन हुँदै जाने र नयाँ क्षमता विकास गर्दै जाने हुन्छ । एउटा स्थानीय तह अर्को स्थानीय तहको बीचमा सहकार्य हुने, केन्द्र र स्थानीय तहबीचमा सहकार्य हुने भएकाले संघीय संरचना लागू हुनेबित्तिकै मुलुकले धान्न सक्दैन कि भनेर डराउनु हुँदैन ।
यसरी डराउनु भनेको पुरानो मानसिकताको उपज मात्रै हो । एउटा प्रणाली लामो समयसम्म एकात्मक सरकारको अभ्यास गर्दा खेरी एकैपटक ठूलो परिवर्तनको छलाङ मार्ने बेलामा यस्ता कुरा पनि आउँछन्, जसले संघीयतालाई स्विकार गरेको छैन ।
ती व्यक्तिहरू नै संघीयताको कार्यान्वयनमा गएका छन् । त्यसैले पनि संक्रमणजस्तो देखिन्छ । यी कुरा बिस्तारै अभ्यासका क्रममा सहज हुँदै जान्छन् । सुरुमा संक्रमणको लागत अलि बढी बेहोर्नुपर्छ ।
त्यो संक्रमणको लागत कति होला ?
राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यससम्बन्धी अध्ययन पक्कै गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने, अहिले आउने बजेट भनेको संघीयतालाई पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्ने बजेट हुनेछ ।